COB Neon Flex LED Strip Light5* 10mm 10W / Meter ၃၇၈ LEDs / m ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ - Light On
Home > Products > LED Strip Light > နီယွန် Flex COB Strip LED > COB Neon Flex LED Strip Light 5*10mm 10W/Meter 378 LEDs/m
COB LED Strip Light သည်အစက်အပြောက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ ၎င်းအလင်းသည် chip မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသည့် arc fluorescent colloid နှင့်မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုအလင်းပြန်မှုမှင်မှတဆင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ COB Neon Flex LED Strip light5* 10mm 10W / meter 378 LEDs / m သည်ချစ်ပ်များကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများအားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မကြုံစဖူးနီးကပ်စေပြီးစူပါအလင်းရောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းဖန်တီးပေးသည်။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုသည်။
1. ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် COB Neon Flex ကို LED မီးရောင်5* 10mm 10W / မီတာ 378 LEDs / m
ထုတ်ကုန်အမည်: COB Neon Flex ကို LED မီးရောင်5* 10mm 10W / မီတာ 378 LEDs / m IP rating: IP66, IP67
Model No.: ခြင်္သေ့ -LWD24BB65-D9-378-DAT operating Temp .: -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
FPC Width: 10mm * 5mm (W * H) သိုလှောင်ရုံ -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အလင်းအရင်းအမြစ်: COB LED စံအလျား5meters
COB အရေအတွက်: 378 pcs Cuttable length: 55.5mm
LED အရောင်: White လက်မှတ်: CE, ROHS, FCC
Color Temp.: 2700K/3000K/4000K/6500K Warranty: ၃ နှစ်
CRI: â 90, 90 တစ်သက်တာ: နာရီ 50000
SDCM ‰¤5 ထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:5meters/reel/bag
Beam angle: 180 ° အချက်အလက်ထုပ်ပိုး။ : reels / box 50
Luminous Flux: 650lm / m သေတ္တာအရွယ်အစား: 500 * 356 * 206mm
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား: 24V တစ်ဘူးလျှင် G.W 6.5kg(IP20)
ပါဝါ: 10W/m လျှောက်လွှာ အဓိကအလင်းရောင်၊ သွယ်ဝိုက်အလင်းရောင်၊ အမှောင်အပေါက်အလင်းရောင်၊
COB Neon Flex LED Strip light5* 10mm 10W / meter 378 LEDs / m ကို DC24V ပါဝါဖြင့်အသုံးပြုထားသည်။
· Doltless အလင်းရောင်စွမ်းဆောင်ရည်
·အန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများမရှိခြင်းနှင့် ROHS ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်း
4. ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး COB Neon Flex LED Strip light5* 10mm 10W / meter 378 LEDs / m
(၂) ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားသော၊ အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများသည်သင်၏မေးမြန်းခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်စွာဖြင့်အမြဲဖြေဆိုနေလိမ့်မည်။
COB Neon Flex LED Strip light5* 10mm 10W / မီတာ ၃၇၈ LEDs / m ၏အာမခံကာလသည် ၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောနမူနာအမှာစာ (၂ ပီစီအောက်) မွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ASAP အစားထိုးခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ အစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုသင်နောက်တစ်သုတ်တွင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းပို့မည်။
6. FAQ of the COB Neon Flex LED strip light 5*10mm 10W/meter 378 LEDs/m
hot Tags:: COB Neon Flex LED Strip Light5* 10mm 10W / Meter 378 LEDs / m, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊